HELOKA BEVAVA MPISOLOVAVA NY RAHARAHA
HELOKA BEVAVA NY RAHARAHA NY MPISOLOVAVA
Izany no mahatonga ny lalàna mifehy ny heloka bevava sy ny heloka bevava fiarovana — faritra iray izay misy ny mpahay lalàna dia manome laharam-pahamehana.
Inona no atao rehefa raharaha heloka bevava.
Raharaha heloka bevava, ary ny fijery mahaliana Ny olona na fianakaviana amin’ny fampiharana ny lalàna matetika mitondra adin-tsaina ary ny alina tsy ahitan-tory. Fa amin’ny toe-javatra izany dia tokony tsy famoizam-po sy ny kivy, fa mba maika handray fepetra mba hiarovana ny heloka bevava ny raharaha.
Voalohany indrindra, mifandraisa antsika ho ara-dalàna ny fakan-kevitra momba ny heloka bevava ny raharaha. Raha misy fanontaniana lehibe, ny fifanarahana miaraka amin’ny mpisolovava maika ilaina ny manatsoaka hevitra amin’ny sehatra ny firosoana ny fitsarana heloka bevava.
Ny heloka bevava mpisolovava dia mandeha ny minisiteran’ny Raharaha anatiny (na vatana hafa) izay mitarika ny fanadihadiana momba ny heloka bevava, ary dia mahazo ny vaovao rehetra ilaina.
Miaraka isika hampivelatra ny toerana ara-dalàna sy hanorina eo amin’ny fototra fiarovana amin’ny raharaha heloka bevava. Koa izahay dia hilaza Aminareo momba ny lamin firosoana ny heloka bevava fitsarana momba Ny toe-draharaha, ny dingana ho an’ny fanaovana fanadihadiana ny asa, ny fepetra vonjimaika eo amin’ny anjara ary hamaly Ny fanontaniana rehetra.
Tsy maintsy avy hatrany, tsy mamela zavatra nandresy ny fanantenana fa ny zavatra rehetra dia nanapa-kevitra ao amin’ny famindram-po.
Aza adino ny momba ny polisy antontan’isa sy»ny fary, ny rafitra, ny»ambany izay naman’ny fiangonana (naman’ny fiangonana) aza malahelo ny fahafahana hafa heloka bevava ny raharaha
Maimaim-Poana Amin'ny Aterineto Fandraisana Mpanao - Sandoka Raharaham-Barotra Fahazoan-Dalana - Ny Hosoka Fandraisana.antsika